Mareykanka Tirada dhimashada Coronavirus oo kor u dhaaftey 1000 – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Mareykanka Tirada dhimashada Coronavirus oo kor u dhaaftey 1000
Mareykanka ayaa diiwaangeliyay in ka badan 1,000 COVID-19 sida ay dalku xaqiijiyeen inuu ku dhacey in kabadan 69,000 oo kiis.
Aqalka Senate-ka Mareykanka wuxuu meel mariyey qiyaas dhan $ 2 tiriliyan oo loogu talagalay shaqaalaha gargaarka, ganacsiyada, iyo nidaamka daryeelka caafimaadka. Waxay ku noqotay aqalka hoose si loo ansixiyo.
Dhanka kale, madaxa Qaramada Midoobay Antonio Guterres wuxuu bilaabay codsi $ 2bn oo gargaar bani’aadannimo oo caalami ah si loogu caawiyo waddamada faqiirka ah inay la tacaalaan cudurka Coronavirus.
In kabadan 472,000 oo dad ah oo ku nool daafaha dunida ayaa laga helay COVID-19, sida lagu sheegay xog aruurinta jaamacadda Johns Hopkins. In kabadan 114,000 ayaa soo kabsaday, halka in kabadan 21,000 oo qof ay dhinteen.